नेपालमा आयात बढ्दै गएको ‘ग्रिन टी’को ल्याब टेस्ट गरेर हेर्दा प्रहरी चकित ! – Etajakhabar
नेपालमा आयात बढ्दै गएको ‘ग्रिन टी’को ल्याब टेस्ट गरेर हेर्दा प्रहरी चकित !
के हो खात ? खात गाँजाजस्तै लागुऔषध हो। जुन कडा प्रकारको लागुऔषध होइन। दक्षिण अफ्रिकी देशमा उत्पादन हुने यो लागुऔषधको माग युरोपियन देशहरूमा धेरै छ। यो लागुऔषध दुव्र्यसनीहरूमा ‘मनोवैज्ञानिक निर्भरता’ उत्पन्न हुन्छ। यसले भोक नलाग्ने र रमाइलो सोच उत्पन्न गराउँछ।
शरणार्थीको आवरणमा धन्दा पक्राउ परेका तीनैजना सोमालियन नागरिकहरू शरणार्थीको हैसियतमा नेपालमा बस्दै आएका थिए। शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयले शरणार्थीको मान्यता दिएर सहयोग गर्दै आएको थियो।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर १४, २०७४ समय: ९:००:१५